မီးပိုးကောငျ ကို Rove beetle ဒါမှမဟုတျ Paederus လို့ချေါတယျ အမွှီး ၂ ခုပါပွီးတ ခြို့ကလညျး အမွီး ၂ ခှကောငျလို့လညျးချေါတတျကွတယျ ဒီအကောငျကိုကျလို့ဖွဈလာတဲ့အနာတှကေို beetle rush ဒါမှမဟုတျ Paederus dermatitis လို့ချေါတဲ့အရပွေားရောငျရောဂါလို့ချေါပါတယျ
ကိုယျကိုယျတိုငျအကိုကျခံရဖူးလို့ ဒီအကွောငျးလေး ခရြေးပါတယျ တကယျတော့ မီးပိုးကောငျက ကိုကျတယျဆိုတာထကျ အဆိပျရညျနဲ့လူကိုဖွနျးလိုကျတာနဲ့ပိုတူပါတယျ အဲ့ဒီအဆိပျရညျ ထိတဲ့နရော အရပွေားတ၀ှိုကျမှာ ပထမဆုံးနီရဲ လာမယျ ယားယံလာမယျ နောကျပိုငျး တဖွညျးဖွညျးနဲ့ အရညျကွညျဖုလိုမြိုးတှဖွေဈလာတာပါပဲ
သူဖွဈတဲ့အနာပုံစံမြိုးက ရယေုနျနာနဲ့ခနခနမှားတတျကွတယျ သူ့လက်ခဏာတှကေအထကျမှာပွောတဲ့အတိုငျးပဲ ယားယံတယျ ဖွဈတဲ့နရောက အရပွေားတှပေူလာတယျ စပျလာတယျ အရညျကွညျဖုတှဖွေဈလာပွီး အနာပုံစံတှေ ပှားလာသလိုဖွဈတတျပါတယျ ။
လက်ခဏာသိပျမဆိုးရငျတော့ ၃ ရကျ ၄ ရကျလောကျနဲ့ပြောကျနိုငျပမေယျ့ လက်ခဏာပွငျးထနျရငျတော့ ၂ ပတျလောကျထိတောငျမပြောကျပဲကွာတတျတယျ တခြို့ဆိုရငျ အညိုအမညျးတှစှေဲပွီး လနဲ့ခြီအောငျကွာတာလညျးရှိတယျ ဒီအနာကနတေဆငျ့ ဖြားတာတှအေရိုးအဆဈနာကငျြကိုကျခဲတာတှနေဲ့အာရုံကွောရောငျတာတှလေညျးဖွဈတတျပါတယျ
အဓိကကတော့ ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြကိုရှုပျပှနအေောငျမထားပါနဲ့ သနျ့ရှငျးအောငျထားပါ ခွငျထောငျတှေ ခေါငျးအုံးတှေ စောငျတှကေိုပုံမှနျလြှျောပါ အခနျးအပွငျဖကျ နဲ့ကျောရဈတာလိုနရောမြိုးတှမှော သတိထားပါ
အငျးဆကျ သို့မဟုတျအကောငျတဈကောငျကောငျနဲ့ထိမိတယျလို့သံသယရှိရငျ ရေ နဲ့ဆပျပွာနဲ့သနျ့ရှငျးအောငျဆေးကွော အနာဖွဈလာပွီဆိုရငျ တတျကြှမျးတဲ့ဆရာဝနျနဲ့ သခြောကုသပါ ။
ဆရာဝနျလညျးမပွနိုငျသေးဘူး အလှမျးဝေးတယျဆိုရငျတော့ဆေးမွှီးတိုတှမေလိမျးပါနဲ့ အနာဖွဈတဲ့နရောကို အေးနအေောငျထားပါ Aloe Vera Soothing Gel ရှိရငျလိမျးလို့ရတယျ သကျသာပါတယျ နာနရေငျတော့ အကိုကျအခဲပြောကျဆေး အပြော့စားဖွဈတဲ့ Paracetamol လိုဆေးမြိုးကို သောကျထားလို့ရသလို အရမျးယားနရေငျတော့ Antihistamine အုပျစုထဲကတမြိုးမြိုးသောကျထားနိုငျပါတယျ
အရေးကွီးတာက လိမျးဆေးတှေ ( ဆေးမွှီးတိုတှေ ) မလိမျးပါနဲ့ ဆရာဝနျညှနျတဲ့အတိုငျးကုသမှုခံယူလိုကျရငျ သကျသာပြောကျကငျးသှားမှာဖွဈပါတယျ ။
ပုရှကျဆိတျနဲ့ခပျဆငျဆငျ ဒီအကောငျ Paederus ကို ဆကျလကျလလေ့ာခငျြရငျတော့ https://en.wikipedia.org/wiki/Paederus မှာ ဖတျလို့ရပါတယျ
Paederus dermatitis အကွောငျးကို https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3225135/ ဒီမှာလညျးရေးထားပါတယျ
ပုံတှကေိုတော့ အငျတာနကျ google မှာ ရှာပွီးထညျ့ထားပါတယျ ။
ကလေး လူကြီး တိုင်း သတိထားရမယ့် မီးပိုးကောင်
မီးပိုးကောင် ကို Rove beetle ဒါမှမဟုတ် Paederus လို့ခေါ်တယ် အမြှီး ၂ ခုပါပြီးတ ချို့ကလည်း အမြီး ၂ ခွကောင်လို့လည်းခေါ်တတ်ကြတယ် ဒီအကောင်ကိုက်လို့ဖြစ်လာတဲ့အနာတွေကို beetle rush ဒါမှမဟုတ် Paederus dermatitis လို့ခေါ်တဲ့အရေပြားရောင်ရောဂါလို့ခေါ်ပါတယ်
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အကိုက်ခံရဖူးလို့ ဒီအကြောင်းလေး ချရေးပါတယ် တကယ်တော့ မီးပိုးကောင်က ကိုက်တယ်ဆိုတာထက် အဆိပ်ရည်နဲ့လူကိုဖြန်းလိုက်တာနဲ့ပိုတူပါတယ် အဲ့ဒီအဆိပ်ရည် ထိတဲ့နေရာ အရေပြားတ၀ှိုက်မှာ ပထမဆုံးနီရဲ လာမယ် ယားယံလာမယ် နောက်ပိုင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အရည်ကြည်ဖုလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတာပါပဲ
သူဖြစ်တဲ့အနာပုံစံမျိုးက ရေယုန်နာနဲ့ခနခနမှားတတ်ကြတယ် သူ့လက္ခဏာတွေကအထက်မှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲ ယားယံတယ် ဖြစ်တဲ့နေရာက အရေပြားတွေပူလာတယ် စပ်လာတယ် အရည်ကြည်ဖုတွေဖြစ်လာပြီး အနာပုံစံတွေ ပွားလာသလိုဖြစ်တတ်ပါတယ် ။
လက္ခဏာသိပ်မဆိုးရင်တော့ ၃ ရက် ၄ ရက်လောက်နဲ့ပျောက်နိုင်ပေမယ့် လက္ခဏာပြင်းထန်ရင်တော့ ၂ ပတ်လောက်ထိတောင်မပျောက်ပဲကြာတတ်တယ် တချို့ဆိုရင် အညိုအမည်းတွေစွဲပြီး လနဲ့ချီအောင်ကြာတာလည်းရှိတယ် ဒီအနာကနေတဆင့် ဖျားတာတွေအရိုးအဆစ်နာကျင်ကိုက်ခဲတာတွေနဲ့အာရုံကြောရောင်တာတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်
အဓိကကတော့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှုပ်ပွနေအောင်မထားပါနဲ့ သန့်ရှင်းအောင်ထားပါ ခြင်ထောင်တွေ ခေါင်းအုံးတွေ စောင်တွေကိုပုံမှန်လျှော်ပါ အခန်းအပြင်ဖက် နဲ့ကော်ရစ်တာလိုနေရာမျိုးတွေမှာ သတိထားပါ
အင်းဆက် သို့မဟုတ်အကောင်တစ်ကောင်ကောင်နဲ့ထိမိတယ်လို့သံသယရှိရင် ရေ နဲ့ဆပ်ပြာနဲ့သန့်ရှင်းအောင်ဆေးကြော အနာဖြစ်လာပြီဆိုရင် တတ်ကျွမ်းတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ သေချာကုသပါ ။
ဆရာဝန်လည်းမပြနိုင်သေးဘူး အလှမ်းဝေးတယ်ဆိုရင်တော့ဆေးမြှီးတိုတွေမလိမ်းပါနဲ့ အနာဖြစ်တဲ့နေရာကို အေးနေအောင်ထားပါ Aloe Vera Soothing Gel ရှိရင်လိမ်းလို့ရတယ် သက်သာပါတယ် နာနေရင်တော့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး အပျော့စားဖြစ်တဲ့ Paracetamol လိုဆေးမျိုးကို သောက်ထားလို့ရသလို အရမ်းယားနေရင်တော့ Antihistamine အုပ်စုထဲကတမျိုးမျိုးသောက်ထားနိုင်ပါတယ်
အရေးကြီးတာက လိမ်းဆေးတွေ ( ဆေးမြှီးတိုတွေ ) မလိမ်းပါနဲ့ ဆရာဝန်ညွှန်တဲ့အတိုင်းကုသမှုခံယူလိုက်ရင် သက်သာပျောက်ကင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။
ပုရွက်ဆိတ်နဲ့ခပ်ဆင်ဆင် ဒီအကောင် Paederus ကို ဆက်လက်လေ့လာချင်ရင်တော့ https://en.wikipedia.org/wiki/Paederus မှာ ဖတ်လို့ရပါတယ်
Paederus dermatitis အကြောင်းကို https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3225135/ ဒီမှာလည်းရေးထားပါတယ်
ပုံတွေကိုတော့ အင်တာနက် google မှာ ရှာပြီးထည့်ထားပါတယ် ။
Labels: Facebook ပျေါမှ စာစုမြား, ဆေးပညာဆိုင်ရာ, ဆေးပညာဖြစ်ရပ်ဆန်းများ
ဒါပမေယျ့ .. အကငျြ့တော့မဆိုးနဲ့ ။
ဒါပမေယျ့ .. လမျးမှားတော့မရောကျစနေဲ့ ။
ဒါပမေယျ့ .. ပကျြတော့မပကျြစနေဲ့ ။
ဒါပမေယျ့ ... လဲတော့မကစြနေဲ့ ။
ဒါပမေယျ့ ...သိက်ခာတော့ မဆငျးရဲစနေဲ့ ။
ဒါပေမယ့် .. အကျင့်တော့မဆိုးနဲ့ ။
ဒါပေမယ့် .. လမ်းမှားတော့မရောက်စေနဲ့ ။
ဒါပေမယ့် .. ပျက်တော့မပျက်စေနဲ့ ။
ဒါပေမယ့် ... လဲတော့မကျစေနဲ့ ။
ဒါပေမယ့် ...သိက္ခာတော့ မဆင်းရဲစေနဲ့ ။
အဓိပ်ပါယျမဲ့ ကရြှုံးနရေမှာကိုကွောကျပါ ။
လောကဓံကို ခေါငျးငုံ့အရှုံးပေးလိုကျရမှာကိုကွောကျပါ ။
သိက်ခာတရားတှေ ပှနျးပဲ့သှားမှာကိုကွောကျပါ ။
အဓိပ္ပါယ်မဲ့ ကျရှုံးနေရမှာကိုကြောက်ပါ ။
လောကဓံကို ခေါင်းငုံ့အရှုံးပေးလိုက်ရမှာကိုကြောက်ပါ ။
သိက္ခာတရားတွေ ပွန်းပဲ့သွားမှာကိုကြောက်ပါ ။
လေးစားမှုရှိမှ ခရီးရှညျကို ဆကျနိုငျပါမယျ ။
ခှငျ့လှတျခွငျးမရှိရငျ ခဈြခွငျးမတ်ေတာလညျးမရှိပါဘူး ။
သညျးခံခွငျးမရှိရငျ ဝေးကှာရတာပါပဲ ။
တဈဦးရဲ့ စိတျကို တဈဦးကမွငျအောငျကွညျ့ပါ
ရိုးသားမှုမရှိရငျ သူစိမျးတှပေါပဲ ။
လေးစားမှုရှိမှ ခရီးရှည်ကို ဆက်နိုင်ပါမယ် ။
ခွင့်လွှတ်ခြင်းမရှိရင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာလည်းမရှိပါဘူး ။
သည်းခံခြင်းမရှိရင် ဝေးကွာရတာပါပဲ ။
တစ်ဦးရဲ့ စိတ်ကို တစ်ဦးကမြင်အောင်ကြည့်ပါ
ရိုးသားမှုမရှိရင် သူစိမ်းတွေပါပဲ ။
နားလညျမှု က ပိုအရေးကွီးတယျ
" နှုတျဖြားက ခြိုသာတဲ့စကားတှထေကျ
လကျတှဆေ့နျတဲ့ ပေးဆပျနိုငျမှုက ပိုအရေးကွီးပါတယျ "
နားလည်မှု က ပိုအရေးကြီးတယ်
" နှုတ်ဖျားက ချိုသာတဲ့စကားတွေထက်
လက်တွေ့ဆန်တဲ့ ပေးဆပ်နိုင်မှုက ပိုအရေးကြီးပါတယ် "
အာလူး ကွကျဥ နဲ့ ကျောဖီ
တဈခါတုနျးက သမီးတဈဦးက ဖခငျကို သူ့ဘ၀က ဘယျလောကျထိ ခကျခဲတယျဆိုတဲ့အကွောငျး ညညျးညူပွီးပွောဆိုပါတယျ ။ ဘ၀ဟာ ခကျခဲကွမျးတမျးလှနျးတာကွောငျ့ ဘယျလို ဖွရှေငျးရမယျဆိုတာတောငျမသိတော့တဲ့အကွောငျး နဲ့ ဘ၀ ရဲ့ စိနျချေါမှုတှကေို မောပနျးနပွေီဖွဈကွောငျး အခြိနျတိုငျး ရုနျးကနျနရေတာ စိတျဓါတျကလြာပွီဖွဈကွောငျးနဲ့ ပွဿနာတဈခုဖွရှေငျးပွီးရငျ နောကျတဈခုက အမွဲစောငျ့ကွိုနတေတျကွောငျး ဖခငျကို ညညျးညူပွောဆိုပါတယျ ။
ဒီအခါ စားဖိုမှုး တဈဦးဖွဈတဲ့ဖခငျကသမီးဖွဈသူကို မီးဖိုခြောငျထဲ ချေါသှားခဲ့တယျ ။ ပွီးတော့ အိုး ၃ လုံးထဲကို ရေ ပမာဏအတူတူထညျ့ပွီး မီး ပမာဏ အတူတူပေးပွီး တညျခဲ့တယျ ။ ဒီလိုနဲ့ အိုး ၃ လုံးဟာ စပွီး ဆူပှကျလာပွီဆိုတာနဲ့ အိုး ၁ လုံးထဲကို အာလူး ထညျ့တယျ နောကျ အိုး ၁ လုံးထဲကို ကွကျဥ ထညျ့တယျ နောကျဆုံးအိုးထဲကိုတော့ ကျောဖီစတှေ့ေ ထညျ့ခဲ့တယျ ။
ပွီးတော့ ဖခငျစားဖိုမှူးဟာ သူ့သမီးဖွဈသူကို ဘာစကားတဈခှနျးမှမပွောပဲ ဆူပှကျနတေဲ့ အိုး ၃ လုံးကို ထိုငျကွညျ့စခေဲ့တယျ ။ သမီးဖွဈသူကတော့ စိတျမရှညျစှာနဲ့ညညျးညူပွီး သူ့ အဖေ ဘာလုပျနတောလဲဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့နပေါသတဲ့ ။ မိနဈ ၂၀ လောကျကွာပွီးတဲ့အခါမှာ သူဟာ မီးဖိုတှကေို ပိတျလိုကျပါတော့တယျ ။ ပွီးတော့ အိုးထဲကနေ အာလူးတှကေို ယူတယျ ပနျးကနျလုံးထဲထညျ့တယျ ။ ကွကျဥကို ဆယျယူတယျ ပနျးကနျလုံးထဲထညျ့တယျ ပွီးတော့ ကျောဖီရတှေကေို ခပျလိုကျပွီး ခှကျတဈခုထဲထညျ့လိုကျတယျ ။
သမီးဖွဈသူဖကျလှညျ့ပွီးမေးတယျ " သမီး အခု ဘာမွငျရလဲ "
" အာလူး ၊ ကွကျဥ နဲ့ကျောဖီပါ " လို့သမီးဖွဈသူက ခကျြခငျြးပွနျဖွတေယျ ။ " သခြောအနီးကပျကွညျ့ပါဦး " ဖခငျကပွောတယျ " အာလူးကို ထိကွညျ့လိုကျပါ " သမီးဖွဈသူက အာလုံးကို လကျနဲ့ထိကွညျ့လိုကျတော့ နူးညံ့ပြော့ပွောငျးနတောကိုတှရေ့တယျ ။ ဖခငျက ကွကျဥကိုယူပွီး ခှဲကွညျ့ပါလို့ပွောတယျ ။ သမီးဖွဈသူက ကွကျဥကိုယူပွီး အခှံတှခှေဲလိုကျတဲ့အခါ အထဲမှာ မာကြောတဲ့ကွကျဥကိုတှလေို့ကျရတယျ ။ နောကျဆုံး ဖခငျက ကျောဖီတဈငုံလောကျသောကျကွညျ့ပါလို့ပွောတယျ ။ သမီးဖွဈသူက သောကျကွညျ့တဲ့အခါ အလှနျမှေးကွိုငျတဲ့ကျောဖီရနံ့ကွောငျ့ သူမ မကျြနှာမှာ အပွုံးလေးတှသေမျးသှားခဲ့တယျ ။
" အဖေ အဲ့ဒါတှကေ ဘာအဓိပ်ပါယျတှလေဲ " ဖခငျဖွဈသူက သမီးကို ကွငျနာစှာ ကွညျ့ရငျးဖွတေယျ ။
" သမီး နားထောငျနျော အာလူး ကွကျဥနဲ့ ကျောဖီစတှေ့ဟော ရနှေေးပူပူထဲမှာ အနအေထားအတူတူ နဲ့အပူခြိနျအတူတူ အခြိနျအတူတူ ထညျ့ထားခွငျးခံရတယျ
အာလူးဟာ အစပိုငျးက မာကြောတယျ သနျမာတယျ ကဈြလဈတယျထငျရတယျ ဒါပမေယျ့ ရပေူနဲ့တှတေဲ့အခါ ပြော့ပွောငျးပွီး အားနညျးသှားခဲ့တယျ
ကွကျဥကတော့ ကှဲအကျလှယျတယျ သူ့အတှငျးပိုငျးအရညျနဲ့အနှဈကို အပွငျခှံပါးပါးလေးနဲ့ ဖုံးအုပျထားပမေယျ့ တကယျ့ ရပေူနဲ့တှတေဲ့အခါ အတှငျးထဲက ကွကျဥဟာ မာကွောလာခဲ့ရတယျ
ဒါပမေယျ့ ကျောဖီစကေ့တော့ ထူးခွားတယျ သူဟာ ရပေူနဲ့ထိတှတေဲ့အခါ အဲ့ဒီ သူ့ကိုပူလောငျစတေဲ့ရကေို မှေးပြံ့တဲ့ ရနံ့နဲ့အရသာရှိတဲ့ ကျောဖီရညျအဖွဈကို ပွောငျးလဲ ဖနျတီးလိုကျတယျ
ဒီတော့ သမီးကရော ... ဘယျလို လူစားမြိုးလဲကှယျ အခကျအခဲနဲ့ ဆငျးရဲဒုက်ခတှကေ သမီးအိမျတံခါးကို လာခေါကျတဲ့အခါ အာလူးလို တုနျ့ပွနျမလား ကွကျဥလို တုနျ့ပွနျမလား ကျောဖီစလေို့ တုနျ့ပွနျမလား " လို့ ပွောလိုကျတဲ့အခါ မှာတော့ သမီးဖွဈသူဟာ အရာရာကို နားလညျသဘောပေါကျသှားခဲ့ပါတော့တယျ ။
ဒါဏျရာနဲ့ နာကငျြမှုတှကေ သငျ့ကိုရှုံးနိမျ့စတောမဟုတျဘူး
ဆငျးရဲဒုက်ခတှကေ သငျ့ကို လဲပွိုစတောမဟုတျဘူး
လောကဓံကို ဘယျလို တုနျ့ပွနျမလဲဆိုတာက .. သငျ့အပျေါမှာပဲမူတညျပါတယျ ။
" ဘယျလောကျပဲ အတားအဆီးတှရှေိရှိ
မုနျတိုငျးလှနျရာ အရပျကို ထိုးဖောကျပြံသနျးဖို့က ကိုယျ့တာဝနျပဲမဟုတျလား "
တစ်ခါတုန်းက သမီးတစ်ဦးက ဖခင်ကို သူ့ဘ၀က ဘယ်လောက်ထိ ခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ညည်းညူပြီးပြောဆိုပါတယ် ။ ဘ၀ဟာ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းလွန်းတာကြောင့် ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာတောင်မသိတော့တဲ့အကြောင်း နဲ့ ဘ၀ ရဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို မောပန်းနေပြီဖြစ်ကြောင်း အချိန်တိုင်း ရုန်းကန်နေရတာ စိတ်ဓါတ်ကျလာပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ပြဿနာတစ်ခုဖြေရှင်းပြီးရင် နောက်တစ်ခုက အမြဲစောင့်ကြိုနေတတ်ကြောင်း ဖခင်ကို ညည်းညူပြောဆိုပါတယ် ။
ဒီအခါ စားဖိုမှုး တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဖခင်ကသမီးဖြစ်သူကို မီးဖိုချောင်ထဲ ခေါ်သွားခဲ့တယ် ။ ပြီးတော့ အိုး ၃ လုံးထဲကို ရေ ပမာဏအတူတူထည့်ပြီး မီး ပမာဏ အတူတူပေးပြီး တည်ခဲ့တယ် ။ ဒီလိုနဲ့ အိုး ၃ လုံးဟာ စပြီး ဆူပွက်လာပြီဆိုတာနဲ့ အိုး ၁ လုံးထဲကို အာလူး ထည့်တယ် နောက် အိုး ၁ လုံးထဲကို ကြက်ဥ ထည့်တယ် နောက်ဆုံးအိုးထဲကိုတော့ ကော်ဖီစေ့တွေ ထည့်ခဲ့တယ် ။
ပြီးတော့ ဖခင်စားဖိုမှူးဟာ သူ့သမီးဖြစ်သူကို ဘာစကားတစ်ခွန်းမှမပြောပဲ ဆူပွက်နေတဲ့ အိုး ၃ လုံးကို ထိုင်ကြည့်စေခဲ့တယ် ။ သမီးဖြစ်သူကတော့ စိတ်မရှည်စွာနဲ့ညည်းညူပြီး သူ့ အဖေ ဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်နေပါသတဲ့ ။ မိနစ် ၂၀ လောက်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာ သူဟာ မီးဖိုတွေကို ပိတ်လိုက်ပါတော့တယ် ။ ပြီးတော့ အိုးထဲကနေ အာလူးတွေကို ယူတယ် ပန်းကန်လုံးထဲထည့်တယ် ။ ကြက်ဥကို ဆယ်ယူတယ် ပန်းကန်လုံးထဲထည့်တယ် ပြီးတော့ ကော်ဖီရေတွေကို ခပ်လိုက်ပြီး ခွက်တစ်ခုထဲထည့်လိုက်တယ် ။
သမီးဖြစ်သူဖက်လှည့်ပြီးမေးတယ် " သမီး အခု ဘာမြင်ရလဲ "
" အာလူး ၊ ကြက်ဥ နဲ့ကော်ဖီပါ " လို့သမီးဖြစ်သူက ချက်ချင်းပြန်ဖြေတယ် ။ " သေချာအနီးကပ်ကြည့်ပါဦး " ဖခင်ကပြောတယ် " အာလူးကို ထိကြည့်လိုက်ပါ " သမီးဖြစ်သူက အာလုံးကို လက်နဲ့ထိကြည့်လိုက်တော့ နူးညံ့ပျော့ပြောင်းနေတာကိုတွေ့ရတယ် ။ ဖခင်က ကြက်ဥကိုယူပြီး ခွဲကြည့်ပါလို့ပြောတယ် ။ သမီးဖြစ်သူက ကြက်ဥကိုယူပြီး အခွံတွေခွဲလိုက်တဲ့အခါ အထဲမှာ မာကျောတဲ့ကြက်ဥကိုတွေ့လိုက်ရတယ် ။ နောက်ဆုံး ဖခင်က ကော်ဖီတစ်ငုံလောက်သောက်ကြည့်ပါလို့ပြောတယ် ။ သမီးဖြစ်သူက သောက်ကြည့်တဲ့အခါ အလွန်မွှေးကြိုင်တဲ့ကော်ဖီရနံ့ကြောင့် သူမ မျက်နှာမှာ အပြုံးလေးတွေသမ်းသွားခဲ့တယ် ။
" အဖေ အဲ့ဒါတွေက ဘာအဓိပ္ပါယ်တွေလဲ " ဖခင်ဖြစ်သူက သမီးကို ကြင်နာစွာ ကြည့်ရင်းဖြေတယ် ။
" သမီး နားထောင်နော် အာလူး ကြက်ဥနဲ့ ကော်ဖီစေ့တွေဟာ ရေနွေးပူပူထဲမှာ အနေအထားအတူတူ နဲ့အပူချိန်အတူတူ အချိန်အတူတူ ထည့်ထားခြင်းခံရတယ်
အာလူးဟာ အစပိုင်းက မာကျောတယ် သန်မာတယ် ကျစ်လစ်တယ်ထင်ရတယ် ဒါပေမယ့် ရေပူနဲ့တွေ့တဲ့အခါ ပျော့ပြောင်းပြီး အားနည်းသွားခဲ့တယ်
ကြက်ဥကတော့ ကွဲအက်လွယ်တယ် သူ့အတွင်းပိုင်းအရည်နဲ့အနှစ်ကို အပြင်ခွံပါးပါးလေးနဲ့ ဖုံးအုပ်ထားပေမယ့် တကယ့် ရေပူနဲ့တွေ့တဲ့အခါ အတွင်းထဲက ကြက်ဥဟာ မာကြောလာခဲ့ရတယ်
ဒါပေမယ့် ကော်ဖီစေ့ကတော့ ထူးခြားတယ် သူဟာ ရေပူနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါ အဲ့ဒီ သူ့ကိုပူလောင်စေတဲ့ရေကို မွှေးပျံ့တဲ့ ရနံ့နဲ့အရသာရှိတဲ့ ကော်ဖီရည်အဖြစ်ကို ပြောင်းလဲ ဖန်တီးလိုက်တယ်
ဒီတော့ သမီးကရော ... ဘယ်လို လူစားမျိုးလဲကွယ် အခက်အခဲနဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေက သမီးအိမ်တံခါးကို လာခေါက်တဲ့အခါ အာလူးလို တုန့်ပြန်မလား ကြက်ဥလို တုန့်ပြန်မလား ကော်ဖီစေ့လို တုန့်ပြန်မလား " လို့ ပြောလိုက်တဲ့အခါ မှာတော့ သမီးဖြစ်သူဟာ အရာရာကို နားလည်သဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတော့တယ် ။
ဒါဏ်ရာနဲ့ နာကျင်မှုတွေက သင့်ကိုရှုံးနိမ့်စေတာမဟုတ်ဘူး
ဆင်းရဲဒုက္ခတွေက သင့်ကို လဲပြိုစေတာမဟုတ်ဘူး
လောကဓံကို ဘယ်လို တုန့်ပြန်မလဲဆိုတာက .. သင့်အပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ် ။
" ဘယ်လောက်ပဲ အတားအဆီးတွေရှိရှိ
မုန်တိုင်းလွန်ရာ အရပ်ကို ထိုးဖောက်ပျံသန်းဖို့က ကိုယ့်တာဝန်ပဲမဟုတ်လား "
Labels: Facebook ပျေါမှ စာစုမြား, သော့ကလေးများ ၂, နှလုံးသားအာဟာရ
အခကျအခဲတှကေ သငျ့စိတျကို မာကွောအောငျလကေ့ငျြ့ပေးနတောပါ
ပွဿနာတှကေ သငျ့ကို ခံနိုငျရညျရှိမရှိ စမျးသပျနတောပါ
စိတျဓါတျပြော့ညံ့သူက ၂ ခါရှုံးရတယျ
Do or Die ပါပဲ
" ဖိအားတှဒေါဏျကို မခံနိုငျပဲနဲ့
သငျ... စိနျကောငျးတဈပှငျ့ဖွဈလာမှာမဟုတျဘူး "
အခက်အခဲတွေက သင့်စိတ်ကို မာကြောအောင်လေ့ကျင့်ပေးနေတာပါ
ပြဿနာတွေက သင့်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိမရှိ စမ်းသပ်နေတာပါ
စိတ်ဓါတ်ပျော့ညံ့သူက ၂ ခါရှုံးရတယ်
" ဖိအားတွေဒါဏ်ကို မခံနိုင်ပဲနဲ့
သင်... စိန်ကောင်းတစ်ပွင့်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး "
ကြီးကနျး ၊ ခှေးနဲ့ကွကျဥ
အဲ့ဒီကြီးကနျးက သူရှာတှေ သမြှ အစားအစာတှထေဲမှာ ကွကျဥ ကိုမကွိုကျပါဘူး
ဒီတော့ ကြီးကနျးက အမွဲပဲ သူရှာတဲ့အစားအစာတှထေဲကကွကျဥကို သူ့သဈပငျအောကျခွမှော လာလာအိပျနတေဲ့ ခှေးကိုကြှေးလရှေိ့တယျ
ခှေးကလညျး ကြီးကနျးကို ကြေးဇူးတငျစကားဆိုပါတယျ
ဒီလိုနဲ့ အကငျြ့ဖွဈဖွဈလာတော့ ကွာလာတဲ့အခါ ခှေးရဲ့စိတျထဲမှာ ကြီးကနျးဟာ သူ့ကို ကွကျဥ ပေးကိုပေးရမယျလို့ထငျမှတျလာသတဲ့ ။
ဒီလိုနဲ့ တဈနမှေ့ာ ...
ကြီးကနျးက သူ့အစားအစာတှထေဲက ကွကျဥကို ငါးကိုကြှေးလိုကျတယျ
အဲဒီအခါ ခှေးဟာ ကြီးကနျးကိုမကနြေပျတော့ပဲ မချေါမပွောပဲ နပေါတော့တယျ
တကယျတော့ခှေးဟာ အစကတညျးက ကွကျဥသညျကြီးကနျးရှာဖှထေားတဲ့အတှကျကြီးကနျးပိုငျတယျ သူ့မှာ ဘယျသူ့ကို ပေးမလဲဆိုတဲ့ ဆုံးဖွတျပိုငျခှငျ့ရှိတာကို မသှေ့ားတာဖွဈပါတယျ ။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ခှေးနဲ့ကြီးကနျးဟာ မိတျပကျြပွီး အချေါအပွောမလုပျကွတော့ပါဘူး ။
သငျ့အပျေါကောငျးနတေဲ့လူတှေ တဈနမှေ့ာ ပကျြကှကျခဲ့ရငျ မငွူစူပါနဲ့
သငျ့အပျေါကောငျးပေးဖို့ သူတို့မှာ တာဝနျမရှိပါဘူး ။
သငျ့အပျေါ စတေနာထားတဲ့လူတှေ တဈနမှေ့ာ ပကျြကှကျခဲ့ရငျ မကမြေနပျမဖွဈပါနဲ့
သငျ့အပျေါ စတေနာထားဖို့ သူတို့မှာတာဝနျမရှိပါဘူး ။
သငျ့အပျေါကောငျးဖို့ ဆိုးဖို့ဆိုတာ ဘယျသူ့မှာမှ တာဝနျမရှိပါဘူး ။
ဘယျအခြိနျ ခှဲရမလဲမသိတဲ့ လူ့ဘ၀တိုတိုလေးမှာ
ကြေးဇူးတရားကို သိတတျပွီးအမှတျရနမှေသာ လူပီသပါလိမျ့မယျ ။
အဲ့ဒီကျီးကန်းက သူရှာတွေ သမျှ အစားအစာတွေထဲမှာ ကြက်ဥ ကိုမကြိုက်ပါဘူး
ဒီတော့ ကျီးကန်းက အမြဲပဲ သူရှာတဲ့အစားအစာတွေထဲကကြက်ဥကို သူ့သစ်ပင်အောက်ခြေမှာ လာလာအိပ်နေတဲ့ ခွေးကိုကျွေးလေ့ရှိတယ်
ခွေးကလည်း ကျီးကန်းကို ကျေးဇူးတင်စကားဆိုပါတယ်
ဒီလိုနဲ့ အကျင့်ဖြစ်ဖြစ်လာတော့ ကြာလာတဲ့အခါ ခွေးရဲ့စိတ်ထဲမှာ ကျီးကန်းဟာ သူ့ကို ကြက်ဥ ပေးကိုပေးရမယ်လို့ထင်မှတ်လာသတဲ့ ။
ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့မှာ ...
ကျီးကန်းက သူ့အစားအစာတွေထဲက ကြက်ဥကို ငါးကိုကျွေးလိုက်တယ်
အဲဒီအခါ ခွေးဟာ ကျီးကန်းကိုမကျေနပ်တော့ပဲ မခေါ်မပြောပဲ နေပါတော့တယ်
တကယ်တော့ခွေးဟာ အစကတည်းက ကြက်ဥသည်ကျီးကန်းရှာဖွေထားတဲ့အတွက်ကျီးကန်းပိုင်တယ် သူ့မှာ ဘယ်သူ့ကို ပေးမလဲဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာကို မေ့သွားတာဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ခွေးနဲ့ကျီးကန်းဟာ မိတ်ပျက်ပြီး အခေါ်အပြောမလုပ်ကြတော့ပါဘူး ။
သင့်အပေါ်ကောင်းနေတဲ့လူတွေ တစ်နေ့မှာ ပျက်ကွက်ခဲ့ရင် မငြူစူပါနဲ့
သင့်အပေါ်ကောင်းပေးဖို့ သူတို့မှာ တာဝန်မရှိပါဘူး ။
သင့်အပေါ် စေတနာထားတဲ့လူတွေ တစ်နေ့မှာ ပျက်ကွက်ခဲ့ရင် မကျေမနပ်မဖြစ်ပါနဲ့
သင့်အပေါ် စေတနာထားဖို့ သူတို့မှာတာဝန်မရှိပါဘူး ။
သင့်အပေါ်ကောင်းဖို့ ဆိုးဖို့ဆိုတာ ဘယ်သူ့မှာမှ တာဝန်မရှိပါဘူး ။
ဘယ်အချိန် ခွဲရမလဲမသိတဲ့ လူ့ဘ၀တိုတိုလေးမှာ
ကျေးဇူးတရားကို သိတတ်ပြီးအမှတ်ရနေမှသာ လူပီသပါလိမ့်မယ် ။
တစ်ခါတုန်းက ဂျော့ခ်ျ ဆိုတဲ့ကားဒရိုင်ဘာတစ်ယောက်ရှိတယ် သူဟာဆင်းရဲတာကြောင့် သူ့မိန်းမနဲ့ ကလေး ၃ ယောက်အတွက် ထမင်းနပ်မှန်အောင်ရုန်းကန်ရရှာတယ်
ညနေပိုင်းချိန်တွေမှာဆိုရင် သင်တန်းတွေတက်တယ် ဗဟုသုတတွေရှာမှီးတယ် တစ်နေ့မှာ ဒီထက်ကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကို သူရှာနိုင်မယ် ရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့
ဂျော့ခ်ျရဲ့မိသားစုက ဂျော့ခ်ျကို မိသားစုနဲ့အချိန်သိပ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီး အမြဲ ပဲ စောဒကတက်တယ် ဒါပေမယ့် သူ့အဖြေကတော့တစ်ခုတည်းပါပဲ " ငါ ဒါတွေအားလုံးမင်းတို့အတွက်လုပ်နေတ ငါ့မိသားစုကို ငါထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ငါလုပ်နိုင်သမျှ လုပ်နေတာပါ " တဲ့
ဂျော့ခ်ျဟာ သူဖြေထားတဲ့ စာမေးပွဲအောင်သွားတဲ့အခါ လစာကောင်းကောင်းနဲ့အလုပ်တစ်ခုကို လက်ခံရရှိခဲ့တယ် သူအရင်ရတဲ့ ဝင်ငွေထက်သိသိသာသာပိုများတဲ့ ငွေပမာဏပါပဲ ဒါကြောင့် အခုဆိုရင် ဂျော့ခ်ျဟာ သူ့မိသားစုကို အဖိုးတန် အဝတ်အစားတွေ အသုံအဆောင်တွေနဲ့ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်အလတ်အပတ်ခရီးတွေတောင်ပို့နေနိုင်ပြီဖြစ်တယ် ။ အိပ်မက်တစ်ခု ဖြစ်လာသလိုပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် မိသားစုကတော့ ဂျော့ခ်ျဆီကနေ လိုချင်တဲ့ ဂရုစိုက်မှု နဲ့ နွေးထွေးကြင်နာ အချိန်ပေးနိုင်မှုမရသေးပါဘူး မိသားစုကို အချိန်မပေးနိုင်ဘူး ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတဲ့ စကားတွေကြောင့် ဂျော့ခ်ျဟာ ထပ်ပြီး အလုပ်ကို ကြိုးစားတယ် ဒီအခါ တစ်ပတ်လုံးမှာ မိသားစုကို မြင်တွေ့ရဖို့တောင်ခဲယဉ်းလာခဲ့တယ် ။
အချိန်တွေကုန်လွန်သွားခဲ့တယ် ဂျော့ခ်ျရဲ့အလုပ်ကြိုးစားမှုကြောင့် ရာထူးတိုးခံရပါတယ် ဒီအခါ သူဟာ သူ့မိန်းမကို အနားပေးဖို့စဉ်းစားပြီး အိမ်အကူတစ်ယောက်ခေါ်လိုက်ပါတယ် ။ ပြီးတော့လက်ရှိအိမ်ဟာ မိသားစုအတွက်ကျဉ်းလွန်းတယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက် သူတို့ နဲ့အဆင်ပြေမယ့် အိမ်တစ်လုံး ဝယ်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ။ ဒါကြောင့်သူအလုပ်ကို ဒီထက်ပိုကြိုးစားရတယ် စာတွေပိုလေ့လာခဲ့တယ် ဒီအခါ နောက်ထပ်ရာထူးတိုးခြင်းခံရပြန်တယ် ။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာတောင် သူ့မိန်းမနဲ့ကလေးတွေအတွက်အချိန်မပေးနိုင်တော့ပဲ အလုပ်ကိစ္စ ဧည့်သည်တွေနဲ့သာ အချိန်ကုန်နေလေ့ရှိတယ် ။ ဒီအခါ မိသားစုက ထပ်ပြီး စောဒကတက်ပြန်တယ် သူတို့နဲ့ အတူ အချိန်မပေးနိုင်ဘူး သူတို့ကို ဂရုမစိုက်ဘူး ပေါ့ ဂျော့ခ်ျရဲ့အဖြေကတော့ တစ်ခုတည်းပါပဲ " ငါ ဒါတွေအားလုံးလုပ်နေတာ မင်းတို့အားလုံးအတွက်ပါ " တဲ့
ရာထူးထပ်တိုးခံရပြီး နောက်အချိန်အပိုင်းအခြားမှာ ဂျော့ခ်ျဟာ မြင်ကွင်းသိပ်လှပြီး ကျယ်ဝန်းတဲ့ အိမ်တစ်လုံးကို ဝယ်ယူနိုင်ခဲ့တယ် ။ သူတို့အိမ်သစ်ရဲ့ တနင်္ဂနွေ မနက်ခင်းမှာ ဂျော့ခ်ျဟာ သူ့မိန်းမနဲ့ကလေးကို ခေါ်ပြီးပြောတယ် " ငါအခု ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ နောက်ထပ် စာလေ့လာတာတွေမလုပ်တော့ဘူး အလုပ်တွေချည်းပဲမလုပ်တော့ဘူး ငါချစ်တဲ့မိသားစုနဲ့ ငါအချိန်တွေအများကြီးပေးပြီးနေတော့မယ် " တဲ့ ။
အဲ့ဒီနေ့ညနေ ကုန်ဆုံးပြီး ... နောက်တစ်ရက်မနက်ခင်းမှာတော့ ဂျော့ခ်ျတစ်ယောက် နိုးထ လာနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူး ။
သင်ချစ်တဲ့လူတွေကို ဂရုစိုက်ပါ အချိန်ပေးပါ အချိန်တွေအတူကုန်ဆုံးလိုက်ပါ
ချမ်းသာမှုနဲ့ ကြွယ်ဝမှုနောက်ကိုလိုက်ရင်း ....
သင့်မှာ ပျော်ရွှင်မှုရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို ခံစားနိုင်စွမ်းရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး
နောင်တတရားဆိုတာ အလွန်နောက်ကျမှ ရောက်လာလေ့ရှိပါတယ် ။
inspirationalstories.eu မှ ဘာသာပြန်ပါတယ် ။
တဈခါတုနျးက ဂြော့ချြ ဆိုတဲ့ကားဒရိုငျဘာတဈယောကျရှိတယျ သူဟာဆငျးရဲတာကွောငျ့ သူ့မိနျးမနဲ့ ကလေး ၃ ယောကျအတှကျ ထမငျးနပျမှနျအောငျရုနျးကနျရရှာတယျ
ညနပေိုငျးခြိနျတှမှောဆိုရငျ သငျတနျးတှတေကျတယျ ဗဟုသုတတှရှောမှီးတယျ တဈနမှေ့ာ ဒီထကျကောငျးတဲ့အလုပျတဈခုခုကို သူရှာနိုငျမယျ ရနိုငျမယျဆိုတဲ့ရညျရှယျခကျြနဲ့ပေါ့
ဂြော့ချြရဲ့မိသားစုက ဂြော့ချြကို မိသားစုနဲ့အခြိနျသိပျမပေးနိုငျဘူးဆိုပွီး အမွဲ ပဲ စောဒကတကျတယျ ဒါပမေယျ့ သူ့အဖွကေတော့တဈခုတညျးပါပဲ " ငါ ဒါတှအေားလုံးမငျးတို့အတှကျလုပျနတေ ငါ့မိသားစုကို ငါထောကျပံ့ဖို့အတှကျငါလုပျနိုငျသမြှ လုပျနတောပါ " တဲ့
ဂြော့ချြဟာ သူဖွထေားတဲ့ စာမေးပှဲအောငျသှားတဲ့အခါ လစာကောငျးကောငျးနဲ့အလုပျတဈခုကို လကျခံရရှိခဲ့တယျ သူအရငျရတဲ့ ဝငျငှထေကျသိသိသာသာပိုမြားတဲ့ ငှပေမာဏပါပဲ ဒါကွောငျ့ အခုဆိုရငျ ဂြော့ချြဟာ သူ့မိသားစုကို အဖိုးတနျ အဝတျအစားတှေ အသုံအဆောငျတှနေဲ့ နိုငျငံခွားတိုငျးပွညျအလတျအပတျခရီးတှတေောငျပို့နနေိုငျပွီဖွဈတယျ ။ အိပျမကျတဈခု ဖွဈလာသလိုပါပဲ ။ ဒါပမေယျ့ မိသားစုကတော့ ဂြော့ချြဆီကနေ လိုခငျြတဲ့ ဂရုစိုကျမှု နဲ့ နှေးထှေးကွငျနာ အခြိနျပေးနိုငျမှုမရသေးပါဘူး မိသားစုကို အခြိနျမပေးနိုငျဘူး ဂရုမစိုကျဘူးဆိုတဲ့ စကားတှကွေောငျ့ ဂြော့ချြဟာ ထပျပွီး အလုပျကို ကွိုးစားတယျ ဒီအခါ တဈပတျလုံးမှာ မိသားစုကို မွငျတှရေ့ဖို့တောငျခဲယဉျးလာခဲ့တယျ ။
အခြိနျတှကေုနျလှနျသှားခဲ့တယျ ဂြော့ချြရဲ့အလုပျကွိုးစားမှုကွောငျ့ ရာထူးတိုးခံရပါတယျ ဒီအခါ သူဟာ သူ့မိနျးမကို အနားပေးဖို့စဉျးစားပွီး အိမျအကူတဈယောကျချေါလိုကျပါတယျ ။ ပွီးတော့လကျရှိအိမျဟာ မိသားစုအတှကျကဉျြးလှနျးတယျလို့ယူဆတဲ့အတှကျ သူတို့ နဲ့အဆငျပွမေယျ့ အိမျတဈလုံး ဝယျယူဖို့ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ ။ ဒါကွောငျ့သူအလုပျကို ဒီထကျပိုကွိုးစားရတယျ စာတှပေိုလလေ့ာခဲ့တယျ ဒီအခါ နောကျထပျရာထူးတိုးခွငျးခံရပွနျတယျ ။ တဈခါတဈရံမှာ တနင်ျဂနှနေတှေ့မှောတောငျ သူ့မိနျးမနဲ့ကလေးတှအေတှကျအခြိနျမပေးနိုငျတော့ပဲ အလုပျကိစ်စ ဧညျ့သညျတှနေဲ့သာ အခြိနျကုနျနလေရှေိ့တယျ ။ ဒီအခါ မိသားစုက ထပျပွီး စောဒကတကျပွနျတယျ သူတို့နဲ့ အတူ အခြိနျမပေးနိုငျဘူး သူတို့ကို ဂရုမစိုကျဘူး ပေါ့ ဂြော့ချြရဲ့အဖွကေတော့ တဈခုတညျးပါပဲ " ငါ ဒါတှအေားလုံးလုပျနတော မငျးတို့အားလုံးအတှကျပါ " တဲ့
ရာထူးထပျတိုးခံရပွီး နောကျအခြိနျအပိုငျးအခွားမှာ ဂြော့ချြဟာ မွငျကှငျးသိပျလှပွီး ကယျြဝနျးတဲ့ အိမျတဈလုံးကို ဝယျယူနိုငျခဲ့တယျ ။ သူတို့အိမျသဈရဲ့ တနင်ျဂနှေ မနကျခငျးမှာ ဂြော့ချြဟာ သူ့မိနျးမနဲ့ကလေးကို ချေါပွီးပွောတယျ " ငါအခု ဆုံးဖွတျလိုကျပွီ နောကျထပျ စာလလေ့ာတာတှမေလုပျတော့ဘူး အလုပျတှခေညျြးပဲမလုပျတော့ဘူး ငါခဈြတဲ့မိသားစုနဲ့ ငါအခြိနျတှအေမြားကွီးပေးပွီးနတေော့မယျ " တဲ့ ။
အဲ့ဒီနညေ့နေ ကုနျဆုံးပွီး ... နောကျတဈရကျမနကျခငျးမှာတော့ ဂြော့ချြတဈယောကျ နိုးထ လာနိုငျခွငျးမရှိတော့ပါဘူး ။
သငျခဈြတဲ့လူတှကေို ဂရုစိုကျပါ အခြိနျပေးပါ အခြိနျတှအေတူကုနျဆုံးလိုကျပါ
ခမျြးသာမှုနဲ့ ကွှယျဝမှုနောကျကိုလိုကျရငျး ....
သငျ့မှာ ပြျောရှငျမှုရဲ့အဓိပ်ပါယျကို ခံစားနိုငျစှမျးရှိမှာမဟုတျတော့ပါဘူး
နောငျတတရားဆိုတာ အလှနျနောကျကမြှ ရောကျလာလရှေိ့ပါတယျ ။
inspirationalstories.eu မှ ဘာသာပွနျပါတယျ ။
အဆငျမပွတောတှကေို ပွလေညျအောငျကွိုးစားဖို့သာ လိုပါတယျ
ဘ၀မှာ အောငျမွငျ ခမျြးသာနဖေို့ မလိုပါဘူး
အောကျတနျးကပြွီး မယုတျမာ တတျဖို့သာ လိုပါတယျ
ဘ၀မှာ အရာရာ အဆင်ပြေဖို့မလိုပါဘူး
အဆင်မပြေတာတွေကို ပြေလည်အောင်ကြိုးစားဖို့သာ လိုပါတယ်
ဘ၀မှာ အောင်မြင် ချမ်းသာနေဖို့ မလိုပါဘူး
အောက်တန်းကျပြီး မယုတ်မာ တတ်ဖို့သာ လိုပါတယ်
လြှောကျလှမျးရတာမှမဟုတျဘူးဆိုတာ သိဖို့လိုပါတယျ ။
လျှောက်လှမ်းရတာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိဖို့လိုပါတယ် ။
ဒုက်ခနဲ့ အခကျအခဲတှကေို ရငျဆိုငျကွညျ့လိုကျပါ
"နာကငျြမှုရဲ့ အတိမျအနကျကို ခံစားဖို့ဆိုတာ
ကိုယျကိုယျတိုငျ ဒါဏျရာရမှ ဖွဈနိုငျတာမြိုးပါ"
သငျ့ကိုတနျဖိုးမထားသူတှအေတှကျ အခြိနျကုနျမခံပါနဲ့ ။
ဒုက္ခနဲ့ အခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင်ကြည့်လိုက်ပါ
"နာကျင်မှုရဲ့ အတိမ်အနက်ကို ခံစားဖို့ဆိုတာ
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဒါဏ်ရာရမှ ဖြစ်နိုင်တာမျိုးပါ"
သင့်ကိုတန်ဖိုးမထားသူတွေအတွက် အချိန်ကုန်မခံပါနဲ့ ။
ကိုယျ့ရဲ့ ဖွဈတညျမှုကို ကိုယျကိုယျတိုငျ သတျမှတျနသေရှေ့
ဘ၀ဆိုတာ ... တညျငွိမျစှာ ဖွတျသနျးဖို့ အလှမျးဝေးပါတယျ ။
ကိုယ့်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သတ်မှတ်နေသရွေ့
ဘ၀ဆိုတာ ... တည်ငြိမ်စွာ ဖြတ်သန်းဖို့ အလှမ်းဝေးပါတယ် ။
၂၀၁၉ ခုနှဈကနစေပွီး စာတှပေုံမှနျပွနျရေးနိုငျအောငျကွိုးစားပမေယျ့
ဒီလို သီတငျးကြှတျအခြိနျအခါသမယမှာ ခှငျ့လှတျပေးကွဖို့
ခမျြးမွကွေ့ညျစငျစှာ ဖွတျသနျးနိုငျကွပါစေ ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်ကနေစပြီး စာတွေပုံမှန်ပြန်ရေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပေမယ့်
ဒီလို သီတင်းကျွတ်အချိန်အခါသမယမှာ ခွင့်လွှတ်ပေးကြဖို့
ချမ်းမြေ့ကြည်စင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ ။
မင်း ခြင်္သေ့ဖြစ်ကြောင်း ပြဖို့အတွက်
တစ်ဖက်သားကို ယုန်ဖြစ်တယ်လို့ သက်သေပြစရာမလိုဘူး
မင်း စိန်ဖြစ်ကြောင်း ပြဖိုအတွက်
တစ်ဖက်သားကို ချက်ကျောက်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြစရာမလိုဘူး
မင်း ရဲရင့်ကြောင်း ပြဖို့အတွက်
မင်း တော်ကြောင်း ပြဖို့အတွက်
တစ်ဖက်သား ဘယ်လောက်ညံ့ကြောင်း ဖော်ထုတ်စရာမလိုဘူး
မင်း တန်ဖိုးရှိကြောင်း ပြဖို့အတွက်
တစ်ဖက်သား တန်ဖိုးမဲ့နေခြင်းကို ထင်ပေါ်အောင်လုပ်ဖို့မလိုဘူး
သူတစ်ပါးတွေရဲ့ အထင်သေးခြင်းကို လဲယူလိုက်ခြင်းနဲ့တူပါတယ် ။
မငျး ခွင်ျသဖွေ့ဈကွောငျး ပွဖို့အတှကျ
တဈဖကျသားကို ယုနျဖွဈတယျလို့ သကျသပွေစရာမလိုဘူး
မငျး စိနျဖွဈကွောငျး ပွဖိုအတှကျ
တဈဖကျသားကို ခကျြကြောကျဖွဈကွောငျး သကျသပွေစရာမလိုဘူး
မငျး ရဲရငျ့ကွောငျး ပွဖို့အတှကျ
မငျး တျောကွောငျး ပွဖို့အတှကျ
တဈဖကျသား ဘယျလောကျညံ့ကွောငျး ဖျောထုတျစရာမလိုဘူး
မငျး တနျဖိုးရှိကွောငျး ပွဖို့အတှကျ
တဈဖကျသား တနျဖိုးမဲ့နခွေငျးကို ထငျပျေါအောငျလုပျဖို့မလိုဘူး
သူတဈပါးတှရေဲ့ အထငျသေးခွငျးကို လဲယူလိုကျခွငျးနဲ့တူပါတယျ ။
" နေရောင်ခြည်ပျောက်ကွယ်သွားလို့ ဘယ်တော့မှ မငိုပါနဲ့
မျက်ရည်တွေ ဖုံးလွှမ်းနေရင် ညဖက်ကောင်းကင်က ကြယ်တွေကို မြင်ရတော့မှာ မဟုတ်ဘူး " တဲ့
ဘ၀မှာ အခက်အခဲနဲ့ ရှုံးနိမ့်မှုတွေကြောင့် အကြိမ်ကြိမ်လက်လျော့ဖို့ စဉ်းစားမိပြီလား
ဒါဆို မနက်ဖြန်ရဲ့ နေရောင်ခြည်ကို သင်ဘယ်မြင်ရတော့မလဲ
- နာကျင်မှုတွေက ခံနိုင်ရည်ရှိအောင်သင်ပေးတယ်
- ရှုံးနိမ့်မှုတွေက သင်ခန်းစာတွေကို သင်ပေးတယ်
- ဒါဏ်ရာတွေက နောက်တစ်ကြိမ်မထိခိုက်အောင် သတိပေးတယ်
သင့် စိတ်ခွန်အားနဲ့ မာကြောတဲ့စိတ်ဓါတ်ကို ဘယ်တော့မှ မလွှတ်လိုက်ပါနဲ့ ။
" နရေောငျခွညျပြောကျကှယျသှားလို့ ဘယျတော့မှ မငိုပါနဲ့
မကျြရညျတှေ ဖုံးလှမျးနရေငျ ညဖကျကောငျးကငျက ကွယျတှကေို မွငျရတော့မှာ မဟုတျဘူး " တဲ့
ဘဝမှာ အခကျအခဲနဲ့ ရှုံးနိမျ့မှုတှကွေောငျ့ အကွိမျကွိမျလကျလြော့ဖို့ စဉျးစားမိပွီလား
ဒါဆို မနကျဖွနျရဲ့ နရေောငျခွညျကို သငျဘယျမွငျရတော့မလဲ
- နာကငျြမှုတှကေ ခံနိုငျရညျရှိအောငျသငျပေးတယျ
- ရှုံးနိမျ့မှုတှကေ သငျခနျးစာတှကေို သငျပေးတယျ
- ဒါဏျရာတှကေ နောကျတဈကွိမျမထိခိုကျအောငျ သတိပေးတယျ
သငျ့ စိတျခှနျအားနဲ့ မာကွောတဲ့စိတျဓါတျကို ဘယျတော့မှ မလှတျလိုကျပါနဲ့ ။
နာကငျြမှုနဲ့ နောငျတ ထပျတူအခြိုးညီမှ ရလရှေိ့တယျ ။
နာကျင်မှုနဲ့ နောင်တ ထပ်တူအချိုးညီမှ ရလေ့ရှိတယ် ။
တစ်ဖက်သားရဲ့ အတွင်း စိတ်ကို သေချာသိလိုက်လို့
တစ်ဖက်သားရဲ့ အားနည်းချက်ကို ကိုယ်ချင်းစာလို့
အနိုင်ရလည်း တန်ဖိုးမရှိဖြစ်နေခဲ့လို့ ။
- သိပ်ချစ်လို့ဆိုပြီး ဘာကိုမှ ဖက်တွယ်မထားပါနဲ့
- သိပ်မုန်းလို့ဆိုပြီး ဘာကိုမှ မနာကျည်းနေပါနဲ့
- သိပ်လွမ်းလို့ဆိုပြီး ဘာကိုမှ တမ်းတမနေပါနဲ့
မရေရာခြင်းတွေကိုပဲ ဖက်တွယ်ထားမိမှန်း တစ်နေ့သိလာခဲ့ရင်
မသေချာခြင်းတွေကိုပဲ ကိုင်ဆုပ်မိနေမှန်း တစ်နေ့သိလာခဲ့ရင်
ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်း လွမ်းခြင်းဆိုတာ
ဘ၀ စာမျက်နှာ တစ်ရွက်သာသာမျှပါ ။
ဘ၀မှာ .. ထိုက်တန်ဖို့သာလိုတယ်
ဘ၀မှာ ... တစ်ချက်ပဲ ပြုံးရပြုံးရ
သင်ဟာ ရင့်ကျက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တာ သေချာပါတယ် ။
နောက်ကျောက ဓါးတွေဘယ်လောက်ထက်ကြောင်း သင်ပေးတယ်
ပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့ တန်ဖိုးကို သင်ပေးတယ်
လူကိုလူလို ဆက်ဆံတဲ့သူတွေကိုသာ လေးစားပါ
ဘ၀ဆိုတာ ရှေ့ဆုံးက ပန်းဝင်ဖို့အဓိကမကျဘူး
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ပေါ့ပါးလွတ်လပ်စွာ ရှင်သန်ဖို့ပဲအဓိကကျပါတယ် ။
သင့်မှာ သိပ်ချစ်ရတဲ့ အဖေ ရှိသေးလား ?
သင့်မှာ သိပ်ချစ်ရတဲ့ အမေ ရှိသေးလား ?
သင့်မှာ သိပ်ချစ်ရတဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိသေးလား ?
ချစ်ပါ မြတ်နိုးပါ အချိန်တွေအတူကုန်ဆုံးလိုက်ပါ
အဖေ အမေနဲ့အတူ သူတို့သွားချင်တဲ့နေရာတွေ လိုက်ပို့ပြီးပြီလား ?
အဖေအမေနဲ့အတူ သူတို့စားချင်တဲ့အရာတွေ လိုက်ကျွေးပြီးပြီလား ?
အဖေအမေနဲ့အတူ သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးပြီးပြီလား ?
နောင်တ ဆိုတာ သင်ထင်ထားတာထက် ပိုခါးသီးတတ်ပါတယ် ။
ကိုယ့်စိတ်နှလုံးသား သန့်စင်ဖို့ ကြိုးစားပါ မိတ်ဆွေ ။
သူတစ်ပါးရဲ့ ဒါဏ်ရာ အတိမ်အနက်ကိုမသိနိုင်ဘူး
သူတစ်ပါးရဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခကို ကိုယ်ချင်းစာတတ်လို့မရဘူး
သူတစ်ပါးရဲ့ ပူပင်သောကကို တိုင်းတာနိုင်လို့မရဘူး
သူတစ်ပါးရဲ့ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းကို မမြင်နိုင်ဘူး ။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်အစစ်အမှန်ကို မသိပဲ
လူတစ်ယောက်ရဲ့ အတိတ်အကြောင်းကို မသိပဲ
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နဲ့ မတူးဆွလိုက်ပါနဲ့
လူတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်ရည်တွေကို မမြင်ပဲ
လူတစ်ယောက်ရဲ့ အခက်အခဲနဲ့ရုန်းကုန်မှုကို ကိုယ်ချင်းမစာပဲ
နောက်ကွယ်ကနေ ဘယ်တော့မှ အတင်းမပြောပါနဲ့ ။
Facebook Profile Photo Change
ပင်ပန်းဆင်းရဲခြင်းက သင့်ကို မလဲကျစေနဲ့
မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းက သင့်ကို မပြိုလဲစေနဲ့
ဆက်လျှောက်ရမယ့် လမ်းကြမ်းတွေက သင့်ကို မရပ်တန့်စေနဲ့
အမှောင်ထုက သင့်ကို မဖုံးလွှမ်းစေနဲ့
သင်နဲ့မထိုက်တန်တာတွေကို စွန့်ပစ်ဖို့ဝန်မလေးပါနဲ့ ။
ဘ၀မှာ ဒါတွေကို လက်မလွှတ်ပါနဲ့
ရင်ထဲက နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်တဲ့လူ
သင့်ကို အလုပ်မအားဘူး အမြဲပြောပေမယ့်
သင်အားမယ့်အချိန်တိုင်း အမြဲ အသင့်ရှိနေတတ်သူ
သင်မျက်နှာ တစ်ချက်ပျက်တာနဲ့ ပြာယာခတ်နေတတ်သူ
သင့်ကို အမြဲ ပြုံးပြနေတတ်သူ
နောက်ဆုံး .. သင့်အတွက်နဲ့ အသက်ရှင်သန်နေတဲ့သူ ။
ဘဝမှာ ဒါတှကေို လကျမလှတျပါနဲ့
ရငျထဲက နှဈနှဈကာကာ ခဈြတဲ့လူ
သငျ့ကို အလုပျမအားဘူး အမွဲပွောပမေယျ့
သငျအားမယျ့အခြိနျတိုငျး အမွဲ အသငျ့ရှိနတေတျသူ
သငျမကျြနှာ တဈခကျြပကျြတာနဲ့ ပွာယာခတျနတေတျသူ
သငျ့ကို အမွဲ ပွုံးပွနတေတျသူ
နောကျဆုံး .. သငျ့အတှကျနဲ့ အသကျရှငျသနျနတေဲ့သူ ။
လူတွေမှာ ခံနိုင်ရည်ဆိုတဲ့ threshold ကိုယ်စီရှိကြတယ်
ရိုက်ခတ်မှု threshold ကို သတ္တိရှိရှိ ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ပဲလိုပါတယ်
မျှော်လင့်ချက်ကို ဘယ်တော့မှ မရိုက်ချိုးပါနဲ့
အားနည်းချက်ကို မြင်ရင် ဖေးမကူညီလိုက်ပါ
သင့်မှာလည်း အားနည်းချက် ရှိနေတာပဲမဟုတ်လား ။
လူတွေရဲ့ အတ္တကို ကြောက်မိလို့
ရင်ဘတ်ထဲမှာ ဒါဏ်ရာတွေနဲ့ ပင်ပန်းနေလို့
တစ်ဖက်သား နာကျင်နေရမှာ စိုးလို့ ။